Bible Study - SOMALI BELIEVERS FELLOWSHIP
Muxuu Ilaahay Bin'aadanka u Abuuray? ﻿
Bilowgii 1, 2
​Casharkeenii ugu dambeeyey waxaynu ku soo baranay sidii uu Ilaahay u abuuray samada, dhulka, badaha, iyo waxyaalaha ku dhex nool oo dhan. Ilaahay lix maalmood ayuu wax kasta ku abuuray Isaga oo Eraygiisa oo keliya isticmaalaya. Waxaynu kale oo soo aragnay sababtii uu Ilaahay adduunka u abuuray. Wuxuu iyada u abuuray dadka uu qorsheynayey inuu abuuro si uu Isagu ugu ammaanmo. War muxuu Ilaahay naxariis badan yahay inuu meel sidaa u qurux badan oo u fiican bini'aadanka u abuuro si ay nolol barwaaqo leh ugu noolaadaan!
Sidii uu Ilaaha﻿y Adduunka u Abuuray
​Bilowgii, Ilaahay wuxuu markii ugu horreysey abuuray dhulka iyo samooyinka, oo adduunku wuu madhnaa. Adduunku qaab ma lahayn oo mugdi ayuu ahaa. Shaydaanka iyo malaa'igihiisa ayaa meeshaas joogey. Laakiinse, Ilaahay wuxuu qorsheeyey inuu bini'aadan abuuro, kuwaas oo awood u leh inay Ilaahay gartaan, oo Isaga jeclaadaan oo abidkood adeecaan. Laakiinse, ka hor intii uusan Ilaahay ninka abuurin, Isagu wuxuu qorsheeyey inuu sameeyo adduun qurux badan oo uu ninku si barwaaqo leh ugu noolaan karo. Casharkeenan, waxaynu ku arki doonaa sidii uu Ilaahay adduunka u abuuray oo ugu diyaariyey dadkii uu Isagu qorsheeyey inuu abuuro.
Shaydaanka iyo Malaa'igaha﻿
Ishacyaah 14, Yexesqeel 28
​Waxaynu maanta cashar kale ka baranaynaa Qorniinka Nebiyada. Casharkan oo ku saabsan waxa uu Erayga Ilaahay inaga barayo malaa'igaha iyo Shaydaanka. Adigu ma garanaysaa meesha ay malaa'igahu ka yimaadeen? Ama meesha ay Shaydaanka iyo jiniyadu ka yimaadeen? Ilaahay ayaa wax kuwan ku saabsan Eraygiisa inoogu sheegaya? Markaa aynu si taxadar leh Kitaabka Ilaahay u baadhno si aynu xaqiiqada malaa'igaha iyo Shaydaanka ku saabsan u ogaano.
Waa kuma Ilaahay?
WAA KUMA ILAAHAY? SIDEE AYUU ISAGU U EG YAHAY? Dad badan ayaa u haysta inay dembi tahay in su'aalahan la is weydiiyo, laakiinse in su'aalahan la is weydiiyo oo jawaab loo helaa waxay aasaas u tahay in Ilaaha runta (dad badan ayaa ilaahyo been ah caabuda) ah la garto, oo Isaga la siiyo caabudaada iyo maamuuska uu u qalmo.​
Ilaahay wuu Hadlay!﻿
Akhriste, weli ma is weydiisey jidka aad adigu ku taagan tahay -- ma jidka xaqa ah baa mise waddo lunsan ayaad ku socotaa? Ma dooneysaa inaad ogaato jidka xaqa ah ee Ilaahay banneeyey? Erayga Ilaahay wuxuu odhanayaa, "Waxaabarakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u harraadsan, waayo, way dhergi doonaan." (Matayos 5:6) Laga yaabee inaad u malayso inaad adigu taqaan jidka xaqnimada, oo aadan u baahnayn in laguu sheego. Haddii ay dabeecaddaadu sidan tahay, xasuuso wixii uu qoray nebigii Ilaahay ee Suleymaan, markii uu yidhi, "Waxaa jirta waddo dadka la hagaagsan, Laakiinse dhammaadkeedu waa waddooyinka dhimashada." (Maahmaahyadii 14:12)​
"Eraygaagu wuxuu cagahayga u yahay laambad, Waddooyin-
kaygana iftiin. Waxaan ku dhaartay oo aan weliba xaqiijiyey Inaan dhawrayo xukummadaada xaqa ah." (Sabuurradii 119:105)
"Rabbiga ku mahadnaqa, waayo, isagu waa wanaagsan yahay, Oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa." (Sabuurradii 107:1)
"Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee."
"Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix."
"Sidaas daraaddeed haddii qof Masiix ku jiro waa abuur cusub, oo waxyaalihii hore way idlaadeen, bal eega, wax waliba way cusboonaadeene."
(2 Korintos 5:17)
"Mar kasta Rabbiga ku faraxsanaada, oo weliba waxaan idin leeyahay, Farxa." (Filiboy 4:4)
​"Waad maqasheen in la yidhi, Waa inaad deriskaaga jeclaatid oo cadowgaaga necbaatid,
laakiin waxaan idinku leeyahay, Cadowyadiinna jeclaada, u duceeya kuwa idin habaara, wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb, oo Ilaah u barya kuwa idin caaya oo idin silciya."
"Maxaa yeelay, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah." (Rooma 3:23)
"Laakiinse Masiixu waa inoo dhintay intaynu weli dembilayaal ahayn, oo sidaasuu Ilaah jacaylkiisii inoogu muujiyey." (Rooma 5:8)
"Nimankiinan reer Galiliyow, maxaad la taagan tihiin oo aad samada u eegaysaan? Ciisahan samada laydiinka sare qaaday, sidaad u aragteen isagoo samada u socda oo kale ayuu u iman doonaa."
(Fallimaha Rasuullada 1:11)
​Jesus Film (Somali)
Brother Rachid (Arabic)
​© COPYRIGHT 2019 Somalibelievers.com